Gittyup, mpanjifa Git hijery sy hitantana ny tantaran'ny kaody loharano | Ubunlog
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny Gittyup isika. Ity dia mpanjifa Git maimaim-poana sy misokatra ho an'ny Gnu / Linux izay navoaka teo ambanin'ny lisansa MIT. Miaraka amin'ity programa ity dia afaka mahita sy mitantana mora foana ny dikan-teny sy ny tantaran'ny kaody loharano. Gittyup dia fitohizan'ny mpanjifa grafika ho an'ny Git antsoina GitAhead.
Ity programa ity dia manana interface tsara, izay haingana ary natao hanampiana antsika hahatakatra sy hitantana ny tantaran'ny kaody loharano azonay avy amin'ny tahiry ao amin'ny Internet, na avy amin'ny tahiry eo an-toerana. Ny fizotry ny andalana tokana sy ny fijery hazo roa, dia ahafahantsika mahita ny fiovana eo amin'ny dingana fa tsy mila mahita azy ireo amin'ny hazo samihafa.. Ho fanampin'izany, dia hamela antsika hampitombo ny tantara na ny fomba fijery fampitahana. Ho hitantsika ihany koa ny fahafahana mandingana ny rakitra rehetra voafaritry ny lamina. Ho an'ity sy ny zavatra hafa, ho hitantsika amin'ireto andalana manaraka ireto ny fomba ahafahantsika mametraka Gittyup ao Ubuntu amin'ny fampiasana ny fonosana Flatpak.
1 Gittyup General Features
2 Mametraka Gittyup amin'ny Ubuntu
Gittyup General Features
Haingana ny interface tsara an'ny programa, ary natao hanampiana ny mpampiasa amin'ny fahatakarana sy ny fitantanana ny tantaran'ny kaody loharanontsika.
Ho hitantsika ao amin'ny interface Safidy fikirana samihafa.
Hanana eo am-pelatanantsika a lohahevitra maivana ary maizina iray hafa ho an'ny interface interface.
Hanana ny fijery hazo roa, mba hahitana fiovana amin'ny dingana sy tsy misy dingana.
Afaka manao izany isika ampitomboy ny fomba fijery History na Differential mampiasa ny fitambarana fototra Ctrl + M.
Hisy ihany koa ny tsidiho ny safidy lamina. Izany dia ny fahafahana tsy miraharaha ny rakitra rehetra voafaritry ny lamina fa tsy rakitra iray fotsiny.
Misy koa a mpijery marika. Rehefa mamorona tenifototra vaovao dia hita ny marika rehetra misy. Manamora ny famoronana etikety tsy miovaova izany.
Hamela antsika hampiasa môdely hafatra fanamafisana, izay hanamora ny fanoratana hafatra fanamafisana mifototra amin'ny maodely.
Afaka manao izany isika clone, manangana tahiry ary ampio kaonty Github, Bitbucket, Beanstalk ary Gitlab amin'ny fomba tsotra.
Mametraka Gittyup amin'ny Ubuntu
Hametraka ity programa ity mila mametraka ny teknolojia Flatpak ao amin'ny rafitray izahay. Raha toa ianao ka mampiasa Ubuntu 20.04 ary mbola tsy manana ity teknolojia ity dia afaka manohy ianao The Guide Nisy mpiara-miasa nanoratra momba izany tao amin'ity bilaogy ity vao haingana.
Araka ny nolazaiko, Gittyup dia azo alaina amin'ny fonosana flatpak avy amin'ny Flathub. Rehefa efa manana ny fahafahana mametraka an'io karazana fonosana io ao amin'ny rafitra misy antsika isika dia mila manokatra terminal (Ctrl + Alt + T) fotsiny ary manatanteraka ity baiko manaraka ity ao anatiny. apetraho ny kinova farany navoakan'ny Gittyup ao amin'ny rafitray:
Para havaozy ny programa, rehefa misy dikan-teny vaovao amin'ny programa dia tsy maintsy manatanteraka fotsiny isika:
Aorian'ny fametrahana dia afaka isika tantano ny programa mampiasa ity baiko hafa ity amin'ny terminal iray ihany:
Azonao atao koa ny manomboka ny programa avy amin'ny menio Applications, na avy amin'ny mpandefa fampiharana hafa izay azonay ao amin'ny rafitray.
Para esory amin'ny programa ny programa, ilaina ihany ny manokatra terminal (Ctrl + Alt + T) ary manatanteraka ao aminy:
Ny mpamorona ity seho ity dia milaza fa mandray ny fandraisana anjara amin'ny karazana rehetra, ao anatin'izany ny fanamboarana bug, endri-javatra vaovao, antontan-taratasy ary fandikana. Nambaran'izy ireo ihany koa fa amin'ny fandraisana anjara dia manaiky ny hamoaka ny fandraisana anjara araka ny fepetran'ny lisansa MIT ny mpampiasa.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ity programa ity dia afaka jereo ny tahiry ao amin'ny GitHub an'ny tetikasa. Araka ny voalaza ato amin'ity tahiry ity, ny mpampiasa dia afaka mametraka fanontaniana momba ny famoronana na fampiasana ny Gittyup in Stack Overflow anisan'izany ny etikety gittyup. Afaka mitatitra bibikely ihany koa isika amin'ny fanokafana olana ao amin'ny mpitsikilo olana.
Raha mitady ianao fampiharana hitantana ny tantaran'ny kaody loharanon'ny trano fitehirizanao, Afaka manampy ny Gittyup.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Gittyup, mpanjifa Git mijery sy mitantana ny tantaran'ny kaody loharano
Ny tahan'ny finday mora indrindra tsy misy maharitra